सत्याग्रह रोक्न डा. गोविन्द केसीलाई होटेलमै ‘नजरबन्द’ : प्रधानमन्त्रीको अनैतिक दम्भ र माफियाहरूसँगको साँठगाँठ- डा. केसी
चिकित्सा शिक्षामा सुधार र सुशासनको मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले होटेलमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ । प्रहरीको अवरोधका कारण उनले एक साताका लागि सत्याग्रह स्थगित गरेका छन् । बिहीबारदेखि सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका डा. केसीलाई जुम्ला सदरमुकामस्थित होटेलबाट प्रहरीले बाहिर निस्कनै नदिएपछि सत्याग्रह स्थगित..
चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने सभापति अहिले कामचलाउ मात्रै – नेता पौडेल
पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेपछि विभाग गठन गरेको भन्दै आपत्ती जनाउदै आएका नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिलाई बिधान मिच्ने बानी नै परेको बताएका छन । बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले देउवामा विधान मिच्दा बहादुर ठहर्छु भन्ने मानसिकता रहेको टिप्पणी गरेका छन । 'हामीले बारम्बार पार्टीलाई विधानमा..
१८ वर्षअघि शुरु भएको निजी लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) टाट पल्टिएपछि कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका छन्। तात्कालिन अवस्थामा सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको भनिएको नेपाल टेलिकमको प्रतिष्पर्धीका रुपमा देखिएको यूटीएल व्यवस्थापनमा आएको समस्याले धरासायी भई अन्ततः कम्पनी नै बन्द भएको छ। लगानीकर्ताको बेवास्ताका कारण लामो..
भत्ता खारेज निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट उल्ट्याएर ११ महिनामा कर्मचारी भत्तामा मात्रै ५५ करोड
सरकारले मितव्ययिताको नारा अघि सारेपनि कर्मचारीको भत्तामै करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । पछिल्ला ११ महिनामा संघीय सरकारका कर्मचारीको विभिन्न भत्तामा मात्रै झन्डै ५५ करोड खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि यसमा प्रश्न गरेको छ । महालेखाकाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को ११ महिनामा फिल्ड, बैठक र प्रोत्साहन गरी..